Fanohanana ny fampandrosoana : Nandrotsaka 112 tapitrisa Euros ny Vondrona Eraopeanina -
AccueilRaharaham-pirenenaFanohanana ny fampandrosoana : Nandrotsaka 112 tapitrisa Euros ny Vondrona Eraopeanina
Manao tohivakana ny fanohanana an’i Madagasikara sy ny Fitondram-panjakana. Taorian’ny Fihaonamben’ny Mpamatsy vola (CBI) notanterahina tany Paris, Frantsa, izay nahazoan’i Madagasikara famatsiana sy fanohanana mitentina 10,6 miliara Dolara mantsy, nanolotra tsy ampihambahambana ny azy koa ny teo anivon’ny Vondrona Eraopeanina.
Araka izany, tontosa nandritra ny Dinika Politika, notanterahina tany Antsiranana, nanomboka ny talata 25 Avrily teo hatramin’ny 28 Avrily izao, ny fifanaovan-tsonia ireo fifanaraham-panohanana efatra ho an’i Madagasikara avy amin’ny Vondrondra Eraopeanina, izay tafiditra indrindra amin’ny 11è FED. Mitentina 112 tapitrisa Euros kosa io fifanarahana ao anatin’ny 11è FED vita sonia teo amin’ny governemanta Malagasy sy ny Vondrona Eraopeanina io. Marihina fa ampahany amin’ilay famatsiana 518 tapitrisa Euros amin’ny 11è FED io fifanarahana vita sonia io.
Raha mikasika ny fitsinjarana ilay famatsiana indray, nambaran’ny masoivohon’ny Vondrona Eraopeanina, Benedito Sanchez fa ny 50 tapitrisa Euros amin’izany mirotsaka ho amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Natokana ho amin’ny programan’asa amin’ny fametrahana ny singam-pamatsiana ho an’ny tantsaha mpamokatra mba ahafahan’izy ireo miditra mivantana amin’ny famatsiana amin’ny Fonds de Développement Agricole na ny FDA, ny 40 tapitra Euros. Manaraka izany, 30 tapitrisa Euros ho an’ny fanohanana ara-bola ho amin’ity taom-piasana 2017 ity ary farany, 2 tapitrisa Euros, natokana sy mirotsaka ho an’ny fanamorana ny fifanaraham-piaraha-miasa ara-teknika.
Raha ny marina, efa fampanantenana nataon’ny Vondrona Eraopeanina efa tamin’ny Dinika Politika notanterahina, ny taona 2016 ity fanohanana ny fampandrosoana eto Madagasikara.
Nohitsian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina kosa anefa ny Vondrona Eraopeanina amin’ny familafilana amin’ny famoaham-bola. Porofo mivaingana amin’izany ny fifanitsahan’ny programan’ny 10è sy ity 11è FED ity. Ny 10è FED mbola tsy tapitra ary mbola tsy tontosa hatramin’ny farany ireo programan’asa nefa mitontona indray ity ny programan’asan’ny 11è FED. Marihina mantsy fa tafiditra tamin’ny 10è FED ny fanamboaran-dalana izay nandraisana ny Fihaonamben’ny Frakôfônia saingy, noho ny fahataran’ny famoaham-bola dia voatery nitady famatsiana hafa ny Fitondram-panjakana mba nanatanterahana ny asa tamin’ireo lalam-bavovao nandraisana ny Frakôfônia ireo, sns.
Na izany aza anefa, azo inoana, ny fahatokisan’ny mpamatsy vola ny Fitondrana mijoro ankehitriny ao anatin’ny Repoblika Fahefatra, izay tarihin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.